လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဦးကို လေးမျက်နှာမြို့နယ် အိုင်သပြုကျေးရွာ အုပ်စု ပြည်သူများ ဆန္ဒ - Yangon Media Group
ပုသိမ်၊ မေ ၂၁
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လေးမျက်နှာမြို့နယ် အိုင်သပြု ကျေးရွာတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်နှင့် အမှတ်(၁)တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့ကို အလိုမရှိကြောင်း ဒေသခံ ၁ဝဝဝ ခန့်မေလ ၂၁ ရက် ကနံနက် ၉ နာရီက ဆန္ဒထုတ် ဖော်ခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။
”ကျေးရွာအတွင်း လောင်းကစားဝိုင်းလုပ်တာတွေကို မသိဘူး။ ဒေသခံရေလုပ်သားငယ်တွေ ဆန္ဒ ပြရာ ဝင်ပတ်သက်တယ်။ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်က အိုင်သပြုကျေးရွာ ကမ်းပါးပြိုကျရာမှာ ပါသွားခဲ့တဲ့ အိမ် ခြေ ၅၂ စု ပြန်လည်နေရာချထားခဲ့တုန်းက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေဆီကို ငွေစာရင်းမရှင်းခဲ့ဘူး။ နောက် အဲဒီရပ်ကွက်ထဲမှာနေတဲ့ပြည်သူတွေက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အထင်အမြင်လွဲ အောင် ပြုလုပ်ပြောဆိုခဲ့တယ်ဆိုပြီး ပြည်သူတင်မြှောက်ခဲ့တဲ့ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ပြုတ် အောင် လုပ်ကြံတိုင်ကြားခဲ့တယ်”ဟု ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲ ဦးဆောင်သူ ဦးစိန်ဝင်းက ပြောကြားသည်။
”ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်လည်း တသားထဲရှိပါတယ်။ အတူတကွပူး ပေါင်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ လုပ်ကြံတိုင်ကြားတဲ့ အချက်ငါးချက်နဲ့ ဖြုတ်ချခံရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ကကတ်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာလည်း အရေးယူထားခြင်းမရှိပါဘူး။ ဖြုတ်ချခံရတဲ့အတွက် မည်သည့်တိုင်ကြားမှုမှ မလုပ်ပါဘူး။ ပြည်သူ ၉ဝဝ ကျော် မဲပေးရွေးချယ်ထားတာကို ဖြုတ်ချတာကြောင့် ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်း တွေနဲ့ ပျက်ယွင်းတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းပါဘူး”ဟု အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေုးမှူးဟောင်း ဦးခင်ဇော်က ပြောကြားသည်။ အိုင်သပြုကျေးရွာအုပ်စု တွင် ကျေးရွာပေါင်း ၂၆ ရွာအိမ် ထောင်စုပေါင်း ၁၆ဝ၃ အိမ်ရှိပြီး အများစုမှာ ရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ကိုင် နေကြသည်။
”တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်က တိုင်တာပါ။ကျွန်တော့်ကိုလည်း တိုင်ကြားသူ ရော၊ အတိုင်ခံရတဲ့သူရော၊ တိုင်ပင်တာမရှိဘူး။ ခေါ်စစ်တာလည်း မရှိဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးလိုင်းဆိုတော့ ထွေအုပ်ကစစ်တာပါ။ ကျွန်တော် ကတော့ အခုသူတို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သလိုမျိုးတော့ ပြည်သူကိုတစ်ခါမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ ရဲရဲကြီးအာမခံ နိုင်ပါတယ်”ဟု လေးမျက်နှာမြို့ နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မင်းသိန်းက ပြော ကြားသည်။ ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူများသည် တောင်းဆိုချက်စာသားများပါ ဆိုင်းဘုတ်များကို ကိုင်ဆောင်၍ ကျေးရွာအနှံလှည့်လည်ကာ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ကြသည်။
”ဥပဒေကိုကျော်လွန်ပြီးလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ ဥပဒေနဲ့အညီဆောင် ရွက်ခွင့်ပဲရှိတယ်။ အစိုးရက အပြစ်ရှိလို့ဖြုတ်တာကို လက်မခံနိုင်လို့ ဖြစ်တာ”ဟု လေးမျက်နှာမြို့နယ် အမှတ်(၁)တိုင်းဒေသကြီး လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦစိုးခိုင်က ပြောကြားသည်။ ယခုအခါ အိုင်သပြုကျေး ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရွေးချယ်ပွဲ၌ မဲ ၂ဝဝ ကျော်နှင့် ဒုတိယမဲအများဆုံး ရရှိခဲ့သူမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖြစ် ဆက်လက်တာဝန်ယူနေကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁၆ ဧပြီမှ ၂ဝ၁၈ မတ်လအထိ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဝန်ထမ်း စည်းကမ်းဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှု စုစုပေါင?
ယုတ္တိမတန် လွန်ကဲစွာ အမွှမ်းတင် ကြော်ငြာခြင်းများကို ကြပ်မတ် ထိန်းသိမ်းမှုအပေါ် လွှတ်တော်ကိုယ??
ဒဏ်ရာပြဿနာကို ထရစ်ပီယာ အချိန်ယူ ဖြေရှင်းရနိုင်ဟု ပိုချက်တီနို ဆို
(၄၉) ကြိမ်မြောက် ကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုသင်တန်းသို့ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများမှ သင်တန?
အောင်လံမြို့ သိမ်ကုန်းဓမ္မာရုံ ဘုရားကြီး၏ (၁၂၄) နှစ်မြောက် သီတင်းကျွတ် တာဝတိံသာ ဘုရားဆင်းပွဲ ??
ဒလတံတား တည်ဆောက်ရေး မြေနေရာပေါ် မြေသန့် မင်္ဂလာအခမ်းအနား ကျင်းပ
အင်းလေးကန်အတွင်း စက်လှေနှစ်စင်းတိုက်မိ၊ အသက် လေးနှစ်အရွယ် ကလေးတစ်ဦးရေနစ်သေဆုံး
ဝန်ထမ်းများ ရာထူးတိုးနှင့်နေရာအပြောင်းအရွှေ့များတွင် အဂတိလိုက်စားမှုရှိနေသဖြင့် ပွင့်လင်း
အာရှဖိတ်ခေါ်အမျိုးသမီးဂေါက်ရိုက်ပြိုင်ပွဲကို ကမ္ဘာ့အဆင့်မီမြို့သာဂေါက်ကွင်း၌ ပထမဦးဆုံးလ?